Okraina : Ny Lafy Tsara Sy Ratsin’ny Fampihenana Ny Fanaintainana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2011 0:09 GMT
Fomba ahoana no ahafahan'ny fitsaboana fanolo manova ny fiainan'ny olona miaina amin'ny fidorohana zava-mahadomelina? Ireo bilaogera avy amin'ny Association of Substitution Treatment Advocates of Ukraine (ASTAU) [ru] na Fikambanan'ny Mpisolovavan’ ny Fitsaboana Fanolo ao Okraina, dia mampiasa ny bilaoginy hizaràna ny traikefa niainany.
Ilay bilaogera Viktoria Lintsova dia nanaraka ny fitsaboana fanolo ny opium nandritra ny telo taona. Amin'ny maha mafàna fo azy ao amin'ny y ASTAU, matetika izy no misolo tena ny fikambanana amin'ny karazana famelabelarana, adihevitra an-databatra boribory, ary seho mivantana amin'ny fahitalavitra izay hampahafatarany ny foto-kevitry ny fandaharan'asa fampihenana ny fanaintainana, amin'ny fampiasana ny tantaram-piainany ho ohatra amin'ny vokatra tsara azo avy amin'izany fandaharan'asa izany, izay natao ho an'ireo miaina miankin-doha amin'ny zava-mahadomelina. Any amin'ny renivohitr'i Kirovohrad, tanàna nahaterahany, i Viktoria dia nametraka vondrona mahaleo tena izay manampy ireo marary manaraka ny fitsaboana fanolo mba hiaraka hiady amin'ny olana iraisana.
Ao amin'ny lahatsorany vao haingana dia mamakafaka ny lafiny tsara sy lafiny ratsy amin'ny fiainany, tamin'ny naha marary nanaraka ny fitsaboana fanolo azy izy, ary mamintina fa na teo aza ireo fitsapana sasany dia nisy fiovana tsara azo notsapain-tanana ny fiainany. Toy izao ny nosoratany [ru]:
Notantarain'i Viktoria ny fomba nahatonga azy ho niankin-doha tamin'ny zava-mahadomelina ary nanoritsoritany ireo fotoana maro nanandramany handresy ny fiankinan-doha. Hoy izy nibilaogy:
Ankehitriny i Viktoria dia manana fiainana vaovao ary manararaotra ny fotoana rehetra hanohanana ny fitsaboana ary miaro ny filàna sy ny zon'ny marary. Nampakatra lahatsoratra izy :